‘रेड एरियामा कांग्रेसले जितेको हैन, कम्युनिस्ट हारेका हुन्’ धराने जनतामा चेतना बढेछ, नेकपालाई चेतावनी दिए ! - itaharinews
‘रेड एरियामा कांग्रेसले जितेको हैन, कम्युनिस्ट हारेका हुन्’ धराने जनतामा चेतना बढेछ, नेकपालाई चेतावनी दिए !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १६, २०७६ समय: १६:२३:५३
डा. टंकप्रसाद न्यौपाने
धरान नेपालकै वामपन्थीहरुको गढ मानिने ठाउँ हो । यो रेड एरिया हुनुका पछाडि केही कारणहरु थिए । र, केही कारणहरु अहिले पनि छन् ।
विसं। २०१५ सालको पहिलो नगरपालिका चुनावमा केदारनाथ खनाल पनि वामपन्थीबाटै जितेका हुन् । त्यसपछि पञ्चायतकालमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय नगर प्रमुख भए, उनको पृष्ठभूमि पनि वामपन्थी नै हो । के देखिएको थियो भने, वामपन्थीले समर्थन नगरेमा नजित्ने । वामपन्थीको मौन समर्थन भए पनि आवश्यक पर्ने । यही कारणले धरान वामपन्थीको पकड भएको एरिया नै हो ।
लेफ्टहरु सामान्यतया भारतविरोधी छन् । त्यो भारतविरोधी धारणा धरानमा पहिलेदेखि नै बन्दै आयो । मनमोहन अधिकारी पनि यहाँ आएर धेरै वर्ष बसे । उनले संगठन पनि गरे । महेन्द्र क्याम्पस धरानमा पनि अधिकतम मानिसहरु वामपन्थी थिए । डेमोक्रेटटहरु, कांग्रेसहरुले पढ्न पनि सक्दैनथे । पढ्नुपर्‍यो भने बिराटनगर जानुपर्थ्यो ।
अहिलेको चुनावले चाहिँ वामपन्थीको पकडलाई तोडिदियो । यो नेपाली कांग्रेसका लागि एकदम उत्साहजनक र ऐतिहासिक विजय हो । कांग्रेसको यो विजयबाट कम्युनिस्ट अचम्ममा परेका छन् । धेरैजसो वडाहरु उनीहरुको पकडमा थिए । उनीहरुले यसअघि २० मध्ये १५ वडाहरुमा चुनाव जितेका थिए । यसपालि ४र५ वटामा झर्नु भनेको त ठूलो धक्का हो । यो धक्का वामपन्थीहरुलाई कसरी लाग्यो रु मैले पनि पत्याएको थिइनँ यस्तो होला भनेर ।
तर, म चुनावअघि जति वडाहरुमा गएँ, सर्वसाधारण मजदुरहरुले समेत यसचोटि कांग्रेसलाई दिने भनेको सुनियो । रुखमा, रुखमा भनेको सुनियो ।
उपचुनाव भैसकेपछि मैले ४र५ वटा कुराहरु सोचें ।
पहिलो कुरो( वामपन्थीहरु, कम्युनिस्टहरु हार्नुका पछाडि यो २० वर्षको अवधिमा धरान नगरपालिकामा जुन संयन्त्र बन्यो, त्यसमा कर्मचारीतन्त्र अत्यन्त हावी भयो । जनताले काम गर्न जानुपर्‍यो भने, एउटा सिफारिस लिन जानुपर्‍यो भने पनि अनेक बाहनामा काम नगरिदिने । विशेष गरी निम्न वर्गका मान्छेहरुको काम नगर्दिने । त्यो प्रवृत्ति देखियो ।
नगरपालिकाका ती कर्मचारी भनेका वामपन्थीको पकडका हुन् । एउटा हैन, सबै त्यहाँ वामपन्थीहरु मात्र छन् । तिनै कर्मचारीले दुःख दिएका छन् । उपमेयरले भनेको पनि टेर्दैनन् । उपमेयर आफैं पनि काम गर्न सक्दिनन् । आलाकाँची विचरी हुन् । त्यसकारण यो पहिलो प्रहार नगरपालिकाको कर्मचारी तन्त्रमाथि हो । र, त्यसलाई ठीक गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको विरुद्ध हो जनमत ।
नम्बर दुई( धरानमा नेकपाको जुन नगर कमिटी छ, त्यो नगर कमिटीको नेतृत्व असक्षम छ । यहाँ जाति, जनजाति, ब्राह्मण सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने हो । तर, त्यो किसिमको देखिएको छैन । कम्युनिस्ट वृत्तबाट पनि के प्रतिक्रिया आएको छ भने यहाँको नेकपा नेतृत्वले, शायद सुनसरीको नेतृत्वले आफ्नो पकेटका मान्छे छान्यो । लोकप्रिय मान्छेहरुलाई नगर कमिटीमा ल्याएन । यसले गर्दा नगर कमिटीले सबै वडामा ध्यान पुर्‍याउन सकेन । यसवापत वामपन्थीहरुले नै नेकपा उम्मेदवारलाई जानीजानी भोट नहालेका हुन् चेतावनी दिनका लागि ।
नम्बर तीन(चाररपाँच वर्षअघि नेकपा माओवादीले सुकुम्बासी एरियामा जग्गाधनी लालपूर्जा बाँडेको थियो । अहिलेका सुकुम्बासीहरु पढेलेखेका, शिक्षित छन् । यो लालपूर्जा नक्कली हो भन्ने कुरा उनीहरुले थाहा पाइहाले । भोलि वामपन्थीले नै जित्यो भने के गर्छ त रु त्यही नक्कली लालपूर्जा बाँड्ने रु जनतालाई ठग्ने हो रु उनीहरुलाई यस्तो आशंका लाग्यो । यसबाट पनि नेकपाका मतदाताहरु असन्तुष्ट भए ।
चेतनाको स्तर पनि जनतामा बढेछ । जनता कुनै पार्टीका दास होइनन् । आज एउटा विचार छ, परिस्थिति अनुसार भोलि अर्को विचार हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले अभिव्यक्त गर्‍यो
वामपन्थीहरुको धेरै पकड भएको क्षेत्र भनेको सुकुम्बासी एरिया हो । १३, १५, १६ र १७ नम्बर वडा हो । यी वडाहरुबाट नै वामपन्थीलाई भोट आएन । किनभने, सुकुम्बासीहरु भोट दिनै आएनन् । जब मान्छे भोट दिन आएनन् र भोट कम खसिरहेको छ भनेपछि नेकपाका केही मानिसहरु तिनलाई लिन गए । केही मान्छेहरु आए पनि, तर उनीहरु गेटबाट भित्र छिरेनन् । यो उनीहरुले नेकपालाई च्यालेञ्ज गरेका हुन् ।
चौथो कुराचाहिँ के हो भने चेतनाको स्तर पनि जनतामा अब बढेछ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । जनता कुनै पार्टीका दास होइनन् । आज एउटा विचार छ, परिस्थिति अनुसार भोलि अर्को विचार हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले अभिव्यक्त गर्‍यो ।
र, पाँचौं कुराचाहिँ उम्मेदवारको सवालमा छ । हुन त बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार महत्वपूर्ण होइन म अहिले पनि भन्छु । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हुन्छ । पार्टीलाई गाली गरेर लोकतन्त्र चल्दैन । पार्टी नै सर्वेसर्वा हो । तर, जनताले उम्मेदवारको लोकप्रियता पनि हेर्छन् ।
धरानमा यसपालि वामपन्थीले उठाएका प्रकाश राई शालीन र भद्र व्यक्तित्व हुन्, पार्टीमा अत्यन्त खटेका हुन् । तर, जनताले को कति वर्ष जेल पर्‍यो, कसले पार्टीमा कति योगदान गर्‍यो भनेर हेर्दैनन् । जनताले त आफूसँग सम्पर्क भएको व्यक्ति को छ, त्यो हेर्छन् ।
कांग्रेसका जो तिलक राई हुन्, उनीचाहिँ यातायात व्यवसायी पनि हुन् । यसबाट मजदुर क्षेत्रमा उनको राम्रो सम्पर्क पुग्यो । किरात राई यायोख्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भए । यसबाट पनि उनको आफ्नो जनजाति समाजमा राम्रो पहुँच पुग्यो । र, अलिकति पढेका वौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुन् र सक्रिय व्यक्ति पनि हुन् । नगरपालिकामा पनि केही समय संयन्त्रमा बसेर उनले काम गरे ।
हुन त दुबै उम्मेदवारहरु भद्र छन् । तर, तुलना गर्दाखेरि प्रकाश राईभन्दा तिलक राई अलि उत्तम भनेर जनताले मूल्यांकन गरे । यसैले गर्दा धरान नगरपालिकामा ऐतिहासिक रुपमा नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गरेको हो ।
म त नेपाली कांग्रेसले विजय प्राप्त गरेको भन्दिनँ, यो त कम्युनिष्टहरुमाथिको ठूलो प्रहार हो । अब उनीहरु सच्चिए भने अर्को चुनाव जित्छन्, होइन भने फेरि हार्छन् ।
नेकपाले यति लामो समय काम गर्दा एउटा पनि काम गरेको देखिएको छैन । एउटै ठाउँमा बसपार्क तीनपटकरचार पटकसम्म शिलान्यासमात्रै गरिरहन्छन्, बसपार्क बनाउन सक्दैनन् । यसैले गर्दा उनीहरु पराजित बनेको अनुभव भएको छ ।
अनलाइ खवरवाट साभार
सरकारसँग जनताको भरोसा हटेपछि !
कृष्ण अधिकारी ०७ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा क्रान्तिकारीहरुप्रति जनताको ठूलो भरोसा थियो । किनभने राणातन्त्रको उत्पीडनबाट मु...
ज्यानमारा बन्दै उद्योग !
सन्तोष यादव सुनसरी / घर छेउकै खेतमा धान रोप्न गएकी इटहरी उपमहानगरपालिका–१२ खनारकी शर्मिला सरदार घर आइपुग्दा नपुग्दै हातख...
नारायण ढकालको ओली लक्षित फेकफतुर !
प्रा. डा. बद्रीविशाल पोख्रेल प्रसिद्ध प्रगतिशील आख्यानकार भनिएका नारायण ढकालले २०७६ असार ३१ गते निक्कै नाम चलेको एक अखबा...
हार्दा पनि डा. शेखरनै लोक प्रिय !
सुनदरहरैचा (मोरगं )। नेपाली काँग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोईराला आफ्नो क्षेत्रमा लोक प्रिय छन् । ब्यालेट...
रोजाको वास्तविकता र सामाजिक सद्भाव !
रोजा इस्लाम धर्मावलम्बीको पाँच आधार स्तम्भहरूमध्येको एक हो । अरबी पात्रोको नवौं महिना रमजानमा विश्वभरका मुस्लिमहरू एकैसा...
राजा महेन्द्रको कोखबाट जन्मेका कम्युनिष्टसँग तर्सिनु पर्दैनः प्रदीप गिरी !
नख्खु जेलमा बस्दा मैले एकदुई पटक किशुनजीलाई देखें। यो २०२५ सालको कुरा हो। त्यससमय म नेपाल विद्यार्थी संघको उपाध्यक्ष थिए...